काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक पदमा वरिष्ठ चिकित्सक रोशन पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ११औँ तहमा कार्यरत वरिष्ठ मनोचिकित्सक पोखरेललाई सो पदमा नियुक्त गरिएको हो ।
एघारौँ तहका वरिष्ठतम् भएकाले पोखरेललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । उनी लामो सयमदेखि विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालको निर्देशक पदमा कार्यरत थिए ।
स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीले राजीनामा दिएकी छन् । सचिव चौधरीको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको अनुसार सचिव चौधरीले डब्लुएचओमा
चितवनको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार
चितवन । पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको चितवनको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा यही मङ्सिर १ गतेबाट विस्तारित स्वास्थ्य सेवा (ईएचएस) शुरु गरिने भएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र